Ndi Cavendish na Tour de France 2021? - Tour De France
Isi > Tour De France > Bbc tour de france - ịza ajụjụ ndị a
Bbc tour de france - ịza ajụjụ ndị a
Ndi Cavendish na Tour de France 2021?
Tour de Franceịgba ígwè2021- Nkeji 10 - AkaraCavendishbụ nke 33Njegharịogbo mmeri-akpali nso ka ndekọ.4
Nnukwu ogbo na mwakpo ndị sochiri n'ime otu ọkacha mmasị na agha nke ọkwa ugwu. Ifufe na ịdị elu dị ugbu a iji mee ka o siere ndị na-agba ígwè ike ịrụ ọrụ. Onye mmeri nke, mgbe afọ iri na-enweghị mmeri n'ọsọ ahụ, na-eweta mmeri na obodo ya.
A na-anabata onye ọ bụla na nkenke a dị mkpirikpi nke iri na ise nke njegharị a na 2021. Bauke Mollema weere mmeri ụbọchị ahụ mgbe ọ gasịrị na-ekere òkè na ezumike nke ụbọchị ahụ ma malite mwakpo doro anya na 43 nke akara njedebe site na ịme ka ọdụ ụgbọ mmiri jiri. Nyaahụ, Nairo Quintana na Michael Woods hapụrụ ebe mbụ na nhazi ugwu.
Mark Cavendish ka na-eyi akwa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na Tadej Pogacar na-ele onye ọ bụla anya site na ọkwa ahụ, na-eduga 4:04 n'ihu Guillaume Martin, bụ onye dabara n'elu ikpo okwu mgbe ọ sonyere na nkwụsị ahụ. Rigoberto Urán, Jonas Vingegaard na Richard Carapaz debere otu ihe dị iche na nkeji ise. Taa oke ugwu ahụ na-alaghachi na ụzọ nke kilomita 191 nke ụzọ na mita 4560 nke bumps nke na-amalite n'obodo Ceret na France wee rute Andorra.
A Sprint na kilometa 67 akpata ego maka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ jersey na obere ka e mesịrị mbụ nke ebe anọ. Ozugbo ha kwụsịrị, ha ga-eche ọtụtụ nkwalite dị iche iche. Nke abụọ n’ime ha karịrị mita 2,400 karịa elu oke osimiri ma bụrụkwa ebe kachasị elu nke agbụrụ ahụ.
Mgbe ahụ ị ga-abanye mpaghara Andorra na okporo ụzọ ahụ na-eduga ọzọ n'ịchọ 'col de beixalis', nke na-enyekwa oge ego. Ma na njedebe na Andorra la Vieja na nkpoda 15-kilometa mgbada. Ọ naghị ewere egwuregwu Nacer Bouhanni si ArkeaSamsic wee hapụ ndị otu ya naanị 3 nke ndị ọkwọ ụgbọala 8 ndị malitere ịgba ọsọ na Brest.
Naanị Nairo, Connor Swift na Elie Gesbert ka nọ n'asọmpi maka akwụkwọ mpịakọta French. Ntughari oku maka onye Colombia nke, oburu na o choro inwe ochicho n'egwuregwu ndi okacha amara, kwesiri iche banyere mgbanwe ndi otu maka oge na abia, dika Arkea enweghi nkwado di nkpa iji soro ya. N’ezie, asịrị na enwere ike ibata Nairo na AG2R ka arụ ọrụ, mana ha agaghị abụ ọkwa ọchịchị rue mgbe njegharị ahụ gafere.
Ọtụtụ mgbalị iji mechie ezumike ahụ na kilomita ole na ole mbụ nke ụzọ ahụ. Nke mbụ ọ bụ Michael Woods, ChristopherJul Jensen, Mark Donovan na nna ukwu mgbapụ Thomas De Gendt, onye nọ naanị ya na nkeji. Mgbe nkwado ahụ dara, ndị ọkwọ ụgbọala isii ndị ọzọ, gụnyere Imanol Erviti, Pierre Latour na Dylan Van Baarle mere mgbalị ọhụrụ ahụ.
A na-ejigharị asphalt n'etiti ọgụ na ọgụ, ruo mgbe n'ikpeazụ na kilomita 25 enwere ezumike nke nwere ndị ọgba ọsọ 32. Dị ka a tụrụ anya ya, ndị nwere mmasị n'ugwu bụ ndị mbụ zoro ezo iji nweta isi. N'ebe ahụ ka ha nọ, Van Aert, Michael Woods, Wout Poels na Nairo Quintana.
Na ha aha ndị dị mkpa dị ka Ion Izaguirre, Sergio Luis Henao, Dan Martin, shark Vincenzo Nibali na vetiran soja Alejandro Valverde. Michael Matthews, De Gendt na Ballerini kpebisiri ike site na Sprint pụrụ iche na usoro ahụ. Atọ n'ime ndị otu ahụ rutere na mgbapụ ahụ setịpụrụ ụda ahụ ma ndị ọzọ atọ na-eso Segafredo Trek.
Ejiri ego karịrị ọrụ nkeji ise kwụọ ụgwọ ọrụ ahụ. Laa azụ n'ọhịa, United Arab Emirates weghaara ya ma debe usoro dị mfe maka onye na-agba ọsọ n'ihu Pogacar. Uda nke Mark Cavendish na-enweghị ike ịgbaso, onye malitere ịta ahụhụ ozugbo ọ were nke mbụ n'ime nkwalite anọ ahụ.
Okpomoku na mgbali agbawo ya aka ma o gha edozi ike ya ka oge ghara ịga. Nke mbụ nke agha dị n’etiti ihe atụ na-amalite. Wout Poels, Michael Woods na Wout Van Aert na-eduga ma na-agbaga na nzukọ nke 'Mont Louis'.
Ọ bụ Belum jumbo na-enweta nkewa kachasị mma site na ịga n'ihu. N'oge a ihe dị iche na egwuregwu bụ isi fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkeji 9, n'ihi udo nke peloton, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume na a na-egwuri egwu n'etiti ndị na-apụ apụ. Ọnọdụ okpomọkụ dị elu na-eme ka ndị ọkwọ ụgbọala na-arịọ mgbe niile maka mmiri maka ụgbọ ala mgbe ndị mmadụ na-akpakọrịta taa nwere ụbọchị ọrụ siri ike.
Uzo nke abuo n'etiti ndi ozo nke ọdụ ụgbọ mmiri gara aga. Van Aert bụ akụkụ nke nnukwu ìgwè, Poels na Woods na-esote. Nairo achoghi itinye aka na ọgụ a ma na-ebelata ọkwa.
Ọzọ, jumbo jet na-aga n'ihu wee nweta akara 5. Rịgoro 'Port de Envalira' na-achọ ịmalite. Ebe kachasị elu nke njem ahụ na mita 2,400 dị elu karịa oke osimiri.
Uzo siri ike ya na enweghi ikuku oxygen pụtara na ọtụtụ ụmụ nwoke si na otu 32 kwụsịrị. Nairo jiri uru nke arụmọrụ ya dị elu wee gbanwee usoro ahụ na mbuso agha izizi nke enwere ike ịza. Ọ na-agagharị ọzọ n'akụkụ elu nke ọdụ ụgbọ mmiri na oge a nwalee na-aga nke ọma.
Ọ ga - enyere gị aka ịgafe ọdụ ụgbọ mmiri ma gbakwunye ihe 10 ọ na - enye. Ọ bụ oge nke atọ n'usoro na onye Colombia bụ onye mbụ gafere n'elu njem ahụ. Ka Superman López gachara na 'col de la loze' n'afọ gara aga yana Egan Bernalin na 'Iseran' na 2019.
Guillaume Martin bụ nke abụọ n'ozuzu ya ruo ugbu a, enweghị ike ijide ma daa. Ọ na-anwa ịkwado ọdịda ahụ ka ọ jikọta ọzọ ma enweghị ike ịme ya. Ndị Ineos na Movistar hụrụ nke a ma nyekwuo ọsọ iji nweta Martin n'elu ikpo okwu.
Na ịrịgo ọdụ ụgbọ mmiri ikpeazụ, Nairo na-awakpo Quintana ugboro ole na ole ọzọ ma enwere ike ịgbakwunye ụzọ abụọ ahụ. Sepp Kuss si na jumbo jet na Alejandro Valverde ji ndu nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ sekọnd iri atọ. Onye America dị ike ma jisie ike jiri bọl ahụ kewaa.
Gafee n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ ma buru ụzọ rituo site na iji uru dabara adaba ga-enye gị ohere ịmegharị ahụ n'ụzọ dị mfe. E nwere oge esemokwu na peloton. N'ime ihe karịrị kilomita 4, ndị ọkacha mmasị raara onwe ha nye ọkụ ọkụ, dịka a ga - asị na ọ bụ njedebe nke ụwa.
Nke mbụ, Carapaz kpaliri ìgwè ahụ na mwakpo nke Pogacar n'onwe ya mechiri. Mgbe ahụ Vingegaard gbalịrị ugboro abụọ iji mepụta ebe dị anya, mana enweghị ike imeri ike ndị na-emegide ya. Ben O'Connor mere otu ihe ahụ ugboro abụọ.
Ọbụna Rigoberto Urán n'onwe ya jijiji ma gbalịa ịpụ. Na ndu ahụ, Sepp Kuss rịgoro na mita ole na ole gara aga wee jiri nwayọ gbagoo na akara ahụ, gafere akara ngwụcha ma nweta mmeri mbụ ya na njem na nnukwu ụkwụ nke abụọ mgbe njem 2019 2019 si Spain. Nnukwu Valverde bịarutere na nke abụọ, otu ndị Nairo, Izaguirre, Poels na DanMartin nọ na-aga 1: 15 gbagoro.
Na 4:50 ndi otu ahu biara na ndi okacha amara, Guillaume Martin mekwara ihe dika nkeji iteghete, tufuru uzo nke abuo. Cavendish abata n'ime oge a kara aka wee gaa n'ihu na-eduga isi ihe. Pout Wout na-enwetaghachi uwe elu ugwu na Tadej Pogacar na-aga n'ihu na-eduga ọchịagha ahụ na otu 5: 18 karịa Urán, bụ onye nke abụọ. nke atọ Vingegaard na 5:32 a.m.
Richard Carapaz nke anọ n'elekere 5:33 nke ụtụtụ na Ben O'Connor nke ise na 5:58 ụtụtụ
Mgbe ahụ bịa Kelderman, Lutsenko, Enric Mas, Guillaume Martin na Pello Bilbao. Echi nke izu ike na Tuesday ọkara ụbọchị ugwu na njem anọ. Lee gị n'oge na-adịghị anya site na usoro nke 16.
Nnukwu onye ọ bụla
Onye hapụrụ Tour de France 2021?
Kedu ihe kpatara Mark Cavendish nọ na Tour de France?
Ọ dị afọ abụọ ịhapụ makaCavendishn'ihi nsogbu ahụike, arụ ọrụ na nsogbu, na ịchekwa ụwanjegharịnkwekọrịta. Onye Britain na-agba ọsọ na-akpọ oku na mberede mgbe onye otu ya na onye na-agba ọsọ Sam Bennett si na akwụkwọ akụkọ ahụ.06.29.2021
(egwu elektrọnik) - Ndewo ndị be anyị, kedu nnukwu ụbọchị na Tour de France taa. Know mara, ogbo nke anọ, 2017, Cavendish na Sagan kụrụ. Cavendish sitere na Tour de France, ikekwe ya na ikpere ikpere na Sagan dị mwute ikwu na a gwakwara ya.
Mana akụkọ kachasị ọhụrụ bụ na Sagan arịọla arịrịọ ugbu a. Sagan arịọla ugbu a ka ọ ghara ịba uru na n'ihi ozi a siri ike, anyị ga-eleba anya na eserese a na ngwa ngwa ngwa ngwa zuru ezu ebe a, ọ bụrụ na anyị lere eserese a n'etiti Cavendish na Sagan iji hụ ihe mere, ị chere n'ihi iwu ebe a bụ n'ezie obere ihe na-edochaghị anya. E nwere naanị iwu abụọ.
Omume ime ihe ike ma ọ bụ nke ọgba aghara nke otu onye ọkwọ ụgbọ ala na onye ọzọ na Sprint, iwu a, 2.3.036, amachibidoro onye ọkwọ ụgbọ ala ịhapụ ụzọ a họọrọ mgbe ọ malitere ịmalite ma si otú a tinye ndị ọzọ nọ na gị na ọ nọ n'ihe ize ndụ Cavendish? Ka anyị lelee nke a, anyị mepụtara eserese na nchịkọta akụkọ anyị yana ọ na-atọ ụtọ.
Ka anyị lelee ya anya ọsọ ọsọ; nke a bụ eserese zuru oke nke ndị ọkwọ ụgbọ ala na-anya. Demare malitere mbuso agha ya, ndị ọkwọ ụgbọala niile na-akwagharị n'akụkụ aka nri ha ka anyị na-ekiri, akụkụ aka ekpe nke ụzọ. Cavendish na-agbada ị maara na ọ bụ ọgbaghara.
daa igwe kwụ otu ebe
Ọ bụ hel nke ọgbaghara. Ọ dị njọ. Ọ bụrụ na ịlele eserese helikopta si n’elu na ndụ dị adị n’ezie, ị ga-ahụ ka Sagan na-anyafe ebe ahụ, ndị ọkwọ ụgbọala niile gafere.
Sagan ọ na-aga karịa ndị ọzọ? Agaghị m aga ngwa ngwa ngagharị ugbu a.
Kedu ihe ngosi ngwa ngwa na-egosi na nyocha anyị? E nwere obere ije na ikpere Sagan ga-apụta, yana ikpere aka ekpe ya, n'ụzọ. Aka nri nke Sagan na-apụta, ya mere ikpere aka ekpe ya. Cavendish nwere obere ohere ma ugbu a, ebipụla Cavendish, ụkwụ aka nri ya apụla na pedal, ọ na-ada, yabụ nzaghachi ebumpụta ụwa iji jide ya nke ọma.
Ugbu a, ka anyị lee ya anya site n’elu n’elu nwayọ nwayọ. Nke ahụ na-enwu karịa ugbu a. Ugbu a malite na Demare ebe a, Demare na-amalite ọgụ ya na ọ ga - ejedebe mmeri na mmeri mmeri.
Ọ na-agafe Sagan, Sagan na Cavendishand, ọtụtụ n'ime ndị ọkwọ ụgbọ ala na-ezere ihe ahụ merenụ n'etiti. Ugbu a ndị ọkwọ ụgbọala niile akwagala n'akụkụ aka nri n'enweghị nsogbu. Ọ dịghị ọkwọ ụgbọala na-agbasasị karịa nke ọzọ.
Ọ dịghị onye ọkwọ ụgbọala na-akpata mmetụta a n'oge a. Ihe ahụ ga-eme. Ma na nwute, obere osisi kpuchiri ya, mana Cavendish na-ada ugbu a.
Nwere ike ịhụ Sagans Elbow n'èzí, echeghị m na Sagan enweburu mmekọrịta na Cavendish. Ọ bụ ya ka ọ gbanyụrụ ya? Amaghị m, ọ dabere na nke a metụtara. Ọ bụrụ n’itinye onwe gị n’ọnọdụ Sagan, ị ga - ahụ n’ezie na aka adịghị ya, mana ọ na - eme ihe kacha mma Sagan mere, ọ na - ejide nguzozi ya, ọ na - achọsi ike n’ụlọ akụ.
ngwugwu kamel amazon
Ọ nweghị ike iwepụ aka ya na aka ma ọ bụ na ọ ga-ada, hips ya adịghị n'ahịrị, nke a na-adịghị ahụkebe maka onye na-agba ọsọ. N'uche m, o tinyere ikpere aka ya iji debe nguzo ya. Na site na nke a, Cavendish adabala.
Naanị laghachi azụ etiti ma ọ bụ abụọ ebe a. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ bụ ntakịrị ihe zoro ezo n’akụkụ osisi ahụ. Know ma na ihe ọ bụla mere n’ahịrị dị n’elu bụ nke osisi na-ezo.
Demare si ebe a pụta, Cavendish adabala ugbu a, ma lee ikpere Sagan n'akụkụ a ka ha na-apụta site na kanopi. Okpukpo aka ya adighi nma
Amaghị m ma enwere oghere. Ọ naghị ahapụ ụzọ ya. Rịba ama na ụzọ igwe kwụ otu ebe nke igwe kwụ otu ebe abụọ na-eche ihu n'ihu.
Ugba ala niile na-eche ihu. Ọ bụghị ọdịiche kpatara nsogbu ebe a. Ọ bụ enweghị oghere mgbe ha niile jidere aka nri ahụ, Cavendish na-aga n'ihu.
Ọ nọdata. Sagan ka na-agba mbọ ka ọ kwụ ọtọ. Ma ihe merenụ agwụla n'oge na-adịghị anya.
Ugbu a Cavendish apụtala wee sị, 'Enwere m mgbagwoju anya banyere ikpere aka' mana ọ bụ n'ezie ntụgharị nke ahịrị. Ọ bụ ntụgharị nke ahịrị na-ebute nsogbu na ngbacha ọ gwụla ma a hụrụ Sagan dị ka njikọ nke omume iwe megide Cavendish. Na, na-echeghị echiche, Cavendish anaghị ekwu maka mgbagha ahịrị.
Kedu ndị na-echeta ngbanwe usoro ha na 2016 Olympics? Ha nwere oke uzo di iche ma wepu ya kpamkpam. Know mara, Cavendish abụghị ezigbo onye na-ekwu okwu maka mgbanwe usoro mgbe ụfọdụ nke sprints. Ya mere na echiche nke Fitness Atụmatụ, nke a bụ echiche anyị, Sagan emeghị ihe ike ma ọ bụ na-eme ihe ike megide Cavendish na ikpere aka bụ, n'echiche anyị, ọ bụ ịnwale idobe onwe ya na igwe kwụ otu ebe.
Ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla, ọ dịghị ndị ọkwọ ụgbọala na-agbasasị ọkachasị ndị ọzọ na ntụgharị nke onwe ya, ka ọ ghara ịkpata egwu dị egwu ma ọ bụ na-adịghị mma. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ nweghị nsogbu ọ bụla ọkwọ ụgbọala ọzọ. Yabụ, n'onwe m, echere m na arịrịọ Sagan kwesịrị ịkwado.
Gịnị ka i chere ụmụ okorobịa Nke a bụ obere post na Fast Fitness Atụmatụ naanị n'ihi taa ịrịba ihe. Ọ dị mma, ejiri m n'aka na ị ga-eme ka m mara na ihe ị kwuru n'okpuru ndị folks. Ledo onwe gị.
Nwee ezigbo njem. (Ambient music)
Kedu ihe bụ agba ndụ ndụ na Tour de France?
Emere na 1953 na oge nkeTour de France siAfọ 50th, nkeacha uhie uhie jersey, nke Skoda na-akwado, na-akwụ ndị na-agba ya ụgwọ na-eduzi nhazi ọkwa kwa ụbọchị. A na-enye ihe aka na ngwụcha nke ọkwa na nke etiti na usoro usoro.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, na Tour de France bụ ihe omume ịgba ịnyịnya ígwè kasị ukwuu nke oge ahụ, bụ nke a na-eme na July. Na njem ahụ, ndị na-agba ịnyịnya kachasị mma n'ụwa na-asọ mpi iri abụọ na otu gafee France maka ọnụahịa kachasị na ịgba ịnyịnya na-acha odo odo ugbu a, ọ bụrụ na ị hụbeghị agbụrụ ịgba ọsọ tupu njem ahụ, ọ nwere ike ịbụ ihe izu atọ izu atọ nke ịgba ọsọ kwa ụbọchị. ndị mmeri dị iche iche na ọtụtụ ndị nwere agba dị iche iche Jerseys siri ike idobe, yabụ anyị ga-agbaji ya na ntuziaka onye mbido a na Tour de Frost Gịnị bụ njem ahụ? The Tour de France bụ otu n'ime atọ nnukwu igwe kwụ otu ebe njegharị na ọ bụ? agbụrụ kachasị asọpụrụ na kalenda enweghị ajụjụ dị ka onye mmeri nke njem njegharị ahụ nwere 21 nke ọ bụla na-agbasa n'ime izu atọ ugbu a, usoro ọ bụla agbatịwo oge, onye ndu agbụrụ ahụ na onye mmeri zuru oke kpebisiri ike na a ga-atụle oge ngagharị ugbu a. na mgbakwunye na n'ozuzu ogo dị ka mkpokọta ogo ma ọ bụ izugbe nhazi ọkwa na gcas, nke ọ na-adịkarị zoro aka, ịbụ onye mbụ ịgafe agbaru ọ bụla ogbo na-anyanya ogbo-eto eto The tour na-agụnyekarị ụbọchị abụọ izu ike na-enweghị ọduọ, ọ bụ ezie na ndị na-agba ha na-apụ ma na-eme ikpere iji mee ka ụkwụ ha na-agagharị, mana ha na-ewepụ ụbọchị ndị a iji jide n'aka na ndị na-agba ịnyịnya nwere ike ịgbake ka ha wee nwee ike ịgba ịnyịnya ike dịka o kwere mee n'ụbọchị ndị na-abịanụ iji mee ka agbụrụ ahụ bụrụ ihe na-atọ ụtọ dị ka o kwere mee ugbu a Njegharị na-aga kemgbe 1903 na naanị nkwụsịtụ site na agha ụwa mbụ na nke abụọ malitere na mba agbata obi dị ka Belgium, Netherlands, Great Britain na ebe ndị ọzọ, ugbu a agba nke mbụ nke agbụrụ ahụ a na-emekarị na mba a, mana ha na-aga France maka mmalite a maara dị ka Grand Departall, na-eme njem nleta Tour de France otu n'ime ọkwa ise dị iche iche na-ada na ọkwa mbụ dị larịị usoro ndị a na-enwekarị obere mmasị ma jiri ya mee ihe. agbụrụ dị n'agbata ugwu gafere mpaghara French, ugbu a ndị ọkachamara anyị na-akpọ ndị na-agba ọsọ na-emeri ha, ndị nwere ọsọ ọsọ karịa 70 kilomita kwa elekere ma ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ gaa na njedebe na ebe kachasị ọsọ, mgbe ahụ anyị nwere ugwu nkebi ugbu a ugwu nke njem bu ihe omume bu isi na uzo nke agba o bula na onye obula choro ibu akuku nke ndi nkiri na ndi n’agba ọsọ a gbasaa n’etiti alps nke frenes na pyrenees na usoro ndi a di n’ime izu ato. nke ọtụtụ puku mita ịrị ugwu ị nwere ike ịkwụsị na nnukwu ugwu dị ka ebe a na-aga ma ọ bụ mgbe ụfọdụ mgbe nnukwu ndagwurugwu na-agba ọsọ mgbe nnukwu ịrịgo ugwu ndị a na-adịkarị mma na-agbanye na ha bụ nnukwu mkpebi na-ekpe ikpe n'ozuzu oge ikpe ma ọ bụrụ na ịchọrọ imeri njem nke France ị ga-abụ ezigbo ikpe oge Nke ahụ pụtara na-agba ọsọ megide elekere, n'ihi na ọ bụ mbọ mmadụ n'otu oge na nke ọ bụla ọkwọ ụgbọala n'obere oge n'otu nkeji oge nke ọzọ, ndị ọkwọ ụgbọ ala na-ejikarị ịnyịnya ígwè na akụrụngwa pụrụ iche ka ha wee nwee ike ịgba ọsọ ọsọ ọsọ dị ka o kwere omume n'oge ha nwere ike ịnwale oge ọ bụla, site n'okporo ụzọ dị larịị ruo ugwu na ọbụna ugwu dị ọcha na-enye ohere dị ukwuu maka ọkwa zuru ezu iji tinye oge dị ukwuu na ndị asọmpi. A na-anwale ule oge otu n'otu usoro ahụ dị ka ọnwụnwa nke oge en mana mana ndị otu ahụ na-eduzi ha ugbu a, otu ọ bụla na-apụ ma na-agbagharị na nhazi usoro iche n'echiche nnụnụ na-akwaga na nnukwu V usoro a na-enyere aka imebi ifufe ma debe ijeụkwụ dị oke ngwa ngwa ngwa ngwa dị ka ndị ọrụ ruo na njedebe dịka o kwere mee.
Ugbu a ndị otu niile na-amalitekọ ọnụ na oge ikpeazụ enyere enyere bụ onye na-agba nke ise gafere agba ọsọ, mana ha na-ebukarị mmadụ asatọ agba. Ya mere, mgbe ha nwere ndị ọkwọ ụgbọala asatọ gbadara atọ nke ahụ bụ ise, yabụ ha na-enwekarị ndị ọkwọ ụgbọala atọ na-eme ihe ha nwere ike. Anyị na-atụgharị Calla gburugburu ma na-ere ọkụ nke ọma, ha ga-aga nke miri emi ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịhapụ nso akara ahụ, iji mee ka ndị ọzọ fọdụrụnụ gaa n'ihu na-enweghị ha, ndị na-agba ịnyịnya a ga-agagharịkarị na nke ha, mgbe mgbe dị ka àjà maka onye ndu otu ha, ugbu a, ikpe otu oge na-adị ka igwe mmanụ nwere mmanụ nwere nnukwu uru karịa ndị ọzọ na-eji ụdị mmemme a, onye mmeri niile nke Tour de France bụ otu onye na-agba ịnyịnya nke nwere ọnụ ọgụgụ kacha ala. oge na njedebe nke 21st ogbo, nke kwụsịrị na akara ngosi Champs-Elysees na Paris kemgbe 1975, nnukwu ìgwè ndị na-agba ịnyịnya na njem a maara dị ka peloton thepelotonis nwere ìgwè 22 nke ndị ọkwọ ụgbọala asatọ ọ bụla, yana ndị ọkwọ ụgbọala 176 ọ bụla na mmalite.
Otu ọ bụla nwere ndị ịnyịnya kachasị mma nke mejupụtara onye bụ onye na-agba ịnyịnya ígwè kwa afọ. Ndi otu 22 a gunyere otu ndi otu Top Tier World Tour na ndi otu aka nke otu ndi otu pro-continental nke nwere ndi otu ndi otu ndi otu aka ma ha buru ndi pere mpe, obu ezie na ndi otu ndi nwere ikike ugbu a nwere ezigbo ohere. ndị otu kọntinent iji gosipụta ndị na-akwado ha n'ọsọ kachasị nke oge ahụ, na-asọ mpi megide ìgwè Bigworld Tour ma nwee ike ịdọta ndị na-egwu egwuregwu na-achọ ịdebanye aha ha maka njegharị ụwa na oge na-abịanụ ga-abụ ndị ọkwọ ụgbọala na-aga n'ihu na-agba ọsọ ahụ. na breakaways iji tinyekwuo uche na ndị na-akwado ha, dị ka o kwere mee, ugbu a, ndị otu ga-elekwasị anya na otu ndị ọkwọ ụgbọala abụọ ma ọ bụ abụọ a họpụtara dị ka ndị isi otu ndị otu ga-achọ onye ọ bụla iji merie nkebi ma ọ bụ onye ndenye ọkwa zuru oke nke ebumnuche ya bụ merie Tour de France, na mkpokọta, yana onye ndu ndị ọzọ Otu ndị mejupụtara domestiques, nke pụtara n'ụzọ nkịtị ka ndị ohu ugbu a ndị ọbịa na-akwado te ha Abụ m ndị isi, na-achụrụ ohere ndu ha na inyere ndị otu aka aka imezu ndị Toredomestiq ha na-agakarị n'isi otu ahụ iji belata ijeụkwụ. Mwakpo na-ebelata onye ndu site na ifufe, na-echekwa ike onye ndu ahụ n'okporo ụzọ ebe ụgbọ ala ha na-enweghị ike iru ha, na-enye ha igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ igwe nke ha iji weghachite ha n'okporo ụzọ ozugbo enwere ike iweta agbụrụ, mgbe ọkwa ọ bụla nwere naanị otu onye mmeri ma ọ bụ naanị otu onye ọkwọ ụgbọala meriri njegharị a na ngụkọta mmeri ndị a bụ n'ihi ọrụ impeccable nke ndị otu egwuregwu asatọ na-etinye ya, ọ dịghị onye nwere ike imeri njem njegharị de France naanị ọ gaghị ekwe omume ilu ochie a na-arụkọ ọrụ ọnụ. na-eme ka nrọ ahụ nwee ihe ịga nke ọma na njem ahụ bụ ihe ngosi mara mma nke dị iche iche na agba na-agbagharị site na France nke a ngwakọta nke uwe ndị na-eto eto sitere na ndị na-akwado nkwado logos na-akpali akpali ụkpụrụ na agba agba bụ n'ezie anya n'etiti ndị otu egwuregwu mgbe niile ị nwere ike ịchọta ugbu a Understandghọta Uwe ha Ga - ahụ uwe dị mkpa anọ dị mkpa nke na-ejedebe na nke ọ bụla The Le Mayo Jean jersey jersey bụ ihe osise kacha mkpa na nke kachasị mma nke ndị njem Tour de France. na nke kasị ala chịkọbara oge ka N'ezie, na jersey bụ odo, ekele French magazine Auto, na kpọsaara mbuba na mmalite narị afọ nke 20, e biri ebi na-apụghị ịkọwa edo edo akwụkwọ; ugbu a onye ọ bụla na-eyi a jersey na njedebe nke ogbo 21 ga-emeri Tour de France maka ndụ niile nke nkwanye ùgwù site n'aka ndị ọgbọ na Fans myiri na na-agbata n'ọsọ ego nke 500,000 euro ndị ọcha jersey le Mile Block na-acha ọcha jersey na-egosi onye na-eto eto kachasị mma nke mbuba nke a bụ ihe kasị mma enịm ọkwọ ụgbọala na n'ozuzu standings n'okpuru 25 January mbụ na nwoke ọduọ afọ 'kwere omume na-odo jersey na-acha ọcha jersey na nke a ugbu a bụ odo jersey ga-ahụ na-prioritized na nke abụọ ebe na-eto eto agba n'ozuzu ya na-eyi uwe ọcha na njedebe nke njem ahụ onye na-akachasị mma onye ọkwọ ụgbọ ala na-ewe ụlọ 20,000 euro akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ahụ a na-akpọ Lumaio ver bụ onye na-agba ọsọ na-agba ọsọ niile a na-enye ndị na-akwọ ụgbọala mbụ ka ha gafee akara njedebe kwa ụbọchị dị A na-enye ihe akara Agbanyeghị, dabere na usoro nke ụbọchị, na mgbakwunye na isi okwu ndị a, ụzọ nke ụbọchị ọ bụla na-agbaji ihe a na-akpọ sprints nke na-abịa tupu agba ọsọ, yabụ agbụrụ dịgidere na-atọ ụtọ.
A na-enye ndị na-agba ọsọ ọsọ na-agba ọsọ maka akara egwuregwu na nke agba na onye ọkwọ ụgbọ nwere ọtụtụ isi na njedebe nke ọsọ ahụ na-eyi uwe na-acha akwụkwọ ndụ ugbu a, onye na-agba ọsọ na-anakọta akara a ma ọ bụ eyi ya mgbe ọ meriri Nzọụkwụ na mgbe nile na-abịa n'elu 15, na nkebi ọ naghị emeri ma na-alụ ọgụ na ugwu dị elu Maka ndị na-apụ apụ ị nwere ike ijide sprints dị na etiti ọbụlagodi ụbọchị ị na-emeghị Ọnụahịa nke onye na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ bụ puku euro iri abụọ na ise, dotted jersey la moi poirous in a similar way to the friends of the intermediate phase at the top of each isi nrigo ebe nke mbụ ndị mbụ na-agba ịnyịnya iru n'elu, ọnụ ọgụgụ nke ihe dị dịgasị dabere na nhazi ọkwa nke nrigo , nke ka sie ike ịrịgo, ebe a na-enyekwu ihe ugbu a Onye na-agba ịnyịnya nwere ọtụtụ isi ugwu na-eyi uwe na-acha uhie uhie wee were 25,000 n'ụlọ ya na ngwụsị njem ahụ. Ndị na-ede akwụkwọ na-achọkarị imeri ọkwa dị larịị, na-echebe onwe ha pụọ ​​na ifufe n'azụ ndị otu ha ụbọchị niile na-anwa ịnọ n'akụkụ elu nke ubi ahụ iji zere nsogbu, na-ezere mgbawa nke ngalaba teknụzụ kpatara, mgbanwe mgbanwe, ikuku na-akụ ụdị ihe niile. n'ụzọ nkịtị, mana mgbe ha na-akwa ụta ọ dịghị mgbe ha metụrụ ifufe aka, ha na-ezobe oge niile n'ihu peloton maka narị otu narị mita gara aga ebe ha si n'azụ ndị otu ha pụọ ​​bụ ndị nyere ha nnukwu isi ịmalite imebi mmeri Sprinters mepụtara a ike dị ukwuu ọbụlagodi obere oge ma ị dị oke ọsọ Beingbụ onye na-agba ọsọ bụ ọrụ pụrụ iche ma dị egwu Ọkwọ ụgbọ ala ndị na-emeri agba ọsọ na-esiri ike ịgafe ugwu dị elu Y na-anaghị egekarị ntị site n'aka onye na-agba ọsọ nọ n'otu bes njedebe nke ndị na-agbagharị agbagharị na-abụkarị awa n'azụ ndị mmeri n'ozuzu ha n'ogologo ha nwere ike merie n'ọtụtụ nkebi na njem ahụ A na-emeri ugwu ugwu site na ịrị elu s pecialists Ndị na-agba ịnyịnya a na-arụ ọrụ na ịrịgo na ha na-eme ndị na-agba ọsọ ọsọ na-abụkarị ndị na-agba ịnyịnya bụ ndị na-achọ iji nweta Njegharị iji merie n'ozuzu ha, mana enwekwara ndị na-arị elu n'ọsọ ahụ ndị na-enweghị mmasị na agba odo. Ha nwere naanị otu ebumnuche, ndị bịarutere elu ugwu na iji merie ugwu.
Ugbu a, onye na-agba ịnyịnya chọrọ imeri njegharị ahụ dum kwesịrị ịrị ugwu nke ọma nwere ike ịme nnukwu oghere na njikọ ahụ wee mee ka ndị asọmpi ha tufuo oge dị ukwuu na nhazi zuru oke n'otu oge. Ọnwụnwa nke oge ọ bụla dị mkpa kachasị mkpa na agbụrụ agba, ọ ga-abụkarịrị otu ugboro kwa mbipụta nke njegharị de France, mana ụfọdụ na-agbakwunye mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ karịa ọtụtụ ndị isi otu ndị chọrọ ịmeri ọkwa niile nke Tour ga-abụ enwe ike iwepụta ezigbo oge ikpe. Oge ikpe na-ewe ebe ọ bụla site na 30 nkeji ruo elekere ma ndị na-agba ịnyịnya nwere ikike iji merie ndị asọmpi ha site na nkeji ma ọ bụrụ na ha dị ezigbo mma iji merie asọmpi niile na oge nnwale nnwale ga-enwe nnukwu uru karịa onye na-agba ọsọ agc onye naanị na-adabere na ịrị elu ugwu ọsọ ọsọ iji zụta oge ugbu a n'akụkụ oge a na-anwale oge Oge ọ bụla maka ndị na-agba ịnyịnya atọ ndị mbụ gafere agba ọsọ ga-ewere sekọnd isii na anọ maka nke mbụ, nke abụọ na nke atọ ladiesla tour de franceam na-esote na-abịa pelotoneAnyị izu atọ Ogologo njem na-ewere ọnọdụ na girorosa, agba ọsọ agba ụbọchị iri nke na-amalite na mbido A na-ewerekwa na July, ụlọ ọrụ na-ahazi ngagharị njegharị na-ahazikwa usoro ịgba ọsọ nke nwanyị otu agbụrụ otu ụbọchị emere n'otu uzo di ka ogbo nke ndi nwoke otutu afo.
Nke a bụ ụzọ dị larịị n'akụkụ champs-elyseesin paris nke ọtụtụ ndị na-agba ọsọ na-echekarị na anyị niile kwenyere na ezigbo ụmụ nwanyị-la tour de france ga-agbanwe ihu ụmụ nwanyị na-agba ịnyịnya igwe ruo mgbe ebighi ebi ma bụrụ nnukwu ụzọ iji nweta n'ezie egwuregwu ziri ezi na mụ onwe m maara na ọ ga-abụ ihe dị ịtụnanya iji nwee ike ịhụ nke a wee dịrị ndụ ọ dị mma enwere m mmejọ, kedu ka m ga - esi hụ nke a - ebe kachasị amasị anyị ịhụ ndị njem nleta n'ezie na ọsọ gcn gafere ịhụ ma enwere ike anyị adịtụghị ama mana ma e wezụga njem ahụ anyị nwere ọtụtụ agbụrụ ndị ọzọ dị ukwuu kwa afọ mana gcn dị ọhụụ? Race Pass nwere ihe niile ịchọrọ, ọ nwere ụdị atụmatụ dị iche iche dị ka profaịlụ ọkwa, ndepụta mmalite, ihe ngosi kwa ụbọchị mgbe nyocha agbụrụ na ọtụtụ ihe ọma ndị ọzọ, ọ nwere ezigbo ihe niile ịchọrọ, ma ị bụ onye na-ekiri ekiri ma ọ bụ a oge mbụ fanatic a igwe kwụ otu ebe bụ na nke ahụ bụ ya tour de francethe nnukwu show isi ihe omume n'ụzọ nkịtị nnukwu ihe omume nke afọ na ịgba ígwè ụwa njegharị bụ oké mmalite ma ọ bụrụ na ị hụtụbeghị agbụrụ agbụrụ tupu ma ọ bụrụ na ị masịrị isiokwu a, nye anyị ume ma ọ bụrụ na ị maara onye na-abanye ugbu a na ịgba ịnyịnya ígwè ma nwee ike ịchọ ịmata banyere agbụrụ ịgba ịnyịnya na njegharị. Zitere ha edemede a ka ha wee nwee ọ excitedụ, ekele maka ikiri na anyị ga-ahụ gị oge ọzọ
Onye kpatara ọgba aghara Tour de France?
Ma makaNjegharịiji nwee ihe ịga nke ọma, kwanyere nchekwa ahụ ùgwùnkendị na-agba ịnyịnya! Naokuku kpatarasite na ihe nlere nke onye nlere bu nke mbunkeụbọchị mmeghe. German ọgba tum tum Jasha Suetterlin bụ nke mbụ onye na-agba ọsọ na-ahapụ agbụrụ mgbeokukuna nke abụọọghọmweda ọtụtụ ndị ọzọ, Reuters na-akọ.29. 2021.
Kedu ụdị njem bụ Tour de France 2021?
Oge 183.7km a na - eduga ndị na - agba 151 aka ekpen'imembubasite naCarcassonne ka ugwu Pyrenean dị alankempaghara Aude, n'akụkụ akuku ugwu ọwụwa anyanwụnkeugwu ugwu kewaraFrance siSpain. Site na nhazi ugwu ise, ọ bụghị ụbọchị dị mfe, mana ọ nweghị atụmatụ ọ bụlankeanyi ga ahu izu uka ozo.19
Mark Cavendish ka na-agba ịnyịnya?
Akara Cavendishlaghachi na Tour de France. N'iburu mgba ndị ọ gabigara n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ bụ nnukwu ihe ọ rụpụtara - na nke ọ dị ka ọ dịka nwatakịrị nwoke si Isle nke mmadụ na-emeri usoro 30 nke agbụrụ kachasị.06.26.2021
Akara Cavendishna-agaghị ezumike nká dị nnọọma. N'ezie, ọ bụrụ na ọ dị n'aka Manxman, ọ ga-agba ọsọ n'oge 2021 niile. Oge 30NjegharịOnye mmeri nke France nyere ajụjụ ọnụ mgbe Gent-Wevelgem na Sọnde gara aga nke ọ na-ekwu 'nke ahụ bụ agbụrụ ikpeazụ nke ọrụ m'.
Enweghị onye ọzọ na-agba ịnyịnyaenweela mmeriha atọjesiena otuNjegharịsite naFrance, na naanị Tony Romingerin 1993 na Laurent Jalabert na 1995 nwere ike dakọtara nke a na Grand ọ bụlaNjegharị(ịgba ígwè). Eddy Merkx bụ onye Belgium izizi meririNjegharịsite naFrancekemgbe Sylv? re Maes na 1939. Merckx ghọrọ dike mba.
Kedu ihe bụ agba ọcha na ịgba ígwè?
Naacha ọcha jersey, ma ọ bụ maillot blanc, na-agakwuru onye isi nhazi ọkwa nke dị afọ 25 ma ọ bụ obere (na Jenụwarị 1 na afọ agbụrụ enyere). N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ọ na-agakwuru onye na-agba ịnyịnya kasị mma nke nwere oge kasị ala. Maka ndi n’eto eto, ndi nwere obi uto n’agba oso, na-emeriacha ọcha jerseydị ka mmeri edo edo.iri abụọ na otu . 2021.
Kedu ka esi lelee Tour de France na NBC?
Site na ndị ọrụ NBC Sports ngwa nwere ike soro akụkụ ọ bụla nke Tour de France, gụnyere ozi otu, nyocha ọkwa, eserese, profaịlụ dị elu yana nsonaazụ ọkwa zuru oke yana ọkwa zuru oke maka nhazi ọ bụla. Naanị pịa akara ngosi Tour de France na ala nke ihuenyo ngwaọrụ gị iji soro peloton na-aga Paris.
Bọchị ole ka e nwere na Tour de France?
  editiondị nke ọgbara ọhụrụ nke Tour de France nwere nkeji iri abụọ na otu (usoro) ihe dị ka mkpụrụ ụbọchị iri abụọ na atọ wee gbata kilomita 3,500 (2,200 & nbsp; mi). A na-agbagharị agbụrụ ahụ n'etiti sekit na sekit nke France. 
Kedu usoro nke abụọ nke Tour de France?
Agba nke abụọ nke 2020 Tour de France bụ ugwu ugwu kilomita 187 na-amalite ma kwụsị na Nice. Uzo nke abuo na-adighi nma n'ugwu nwere ike ibuso agha agha na ikwu na uwe ndi odo. Mgbe emechara agbatị dị na 16 kilomita, ndị na-agba ịnyịnya ga-agbago elu abụọ nke 1 na ugwu 1.